Sida haweenka ay maskaxdooda u saameyso dhalmada | Xaysimo
Home War Sida haweenka ay maskaxdooda u saameyso dhalmada
Waxaan wada ognahay in jirka haweeneyda uu ku dhaco isbeddelo badan oo jirka ah xilliga uurka iyo dhalmada kadib.
Laakiin waxa aan si fiican loo aqoon ayaa ah in dhalmada ilmaha ay sidoo kale wax ka beddesho dhismaha maskaxeed ee waalidiinta.
Waxaa la ogaaday in hooyooyinka ama aabayaasha ay la kulmaan isbeddel xagga maskaxda ah oo ku yimaada daryeelka caruurtooda dartii.
Sidaa waxa shaaca ka qaaday weriyaha dhanka Sayniska ee BBC-da Melissa Hogenboom, oo waraysi la yeelatay koox khubarro ah oo si mutadawacnimo ah isugu xilqaamay inay daraasad ku sameeyaan sida carruurtu u saamayso maskaxda.
“Isbeddelka la taaban karo ee heerarka hoormoonka xilliga uurka waxay saameeyaan maskaxda haweeneyda, waxayna u diyaariyaan dhalmada,” ayay tiri Pilyoung Kim, oo ah borofisar ku takhasusay cilmi-nafsiga oo ka tirsan Jaamacadda Denver, ee dalka Mareykanka.
“Waxaan ogaanay in biliha ugu horreeya ee xilliga dhalmada ka dib, hooyada maskaxdeeda ay kor u kacda,” ayay tiri.
“Haweenka intooda badan waxay dareemaan in waxqabadkooda maskaxeed uusan aad u fiicneyn muddadan, iyo inay leeyihiin awood ay wax ku xasuusan karaan,” ayay tiri.
De Lange waxa ay leedahay aragtiyo ku saabsan sababta ay sidaas u dareemi karaan marka maskaxdoodu koreyso.
“Waxay noqon kartaa muddadan in maskaxdu ay hagaagto oo ay bilowdo inay diiradda saarto wax kale,”
“Waxaa jira daraasado muujinaya in isbeddelladani ay la xiriiraan dabeecadaha taranka sida ku-xidhnaanta ilmaha,” ayay tiri.
Isbadalka ku dhaca maskaxda
Saynisyahanada iyo khubarada kale waxaa u suurogashay inay ogaadaan meelaha gaarka ah ee maskaxda ka saameyso koritaanka la xiriira.
Isbeddelladani waxay haweenka siyaan dhiirigelin dheeraad ah si ay uga jawaabaan wicitaannada carruurtooda, iyo inay dareemaan farxad marka carruurtooda yaryar ay dhoola caddeeyaan.
Waxa kale oo jira isbeddelo ku yimaada maskaxda ee la xiriira xakamaynta, taas oo u oggolaanaysa hooyada inay xakamayso welwelkeeda xilligga uu ooynayo ilmaha.
Arrinta aysan khubaradu ogayn ah in isbeddelladan dhawrka sannadood socday ay yihiin kuwa ka dhashay dhalmada iyo isbeddellada hormoonnada, ama in ay dhab ahaantii yihiin waxa loo yaqaanno “brain plasticity”: isbeddellada ma ahan kuwa ka imaanaya uurka balse kuwa ka yimaada dhinaca waayo-aragnimada.
neuroplasticity, waa qaabka ay maskaxda isku habeyso isla markaana habdhiska neerfaha si ay uga jawaabto isbaddalada dibadda ama gudaha.
Waxaana jira cadaymo muujinaya in korinka carruurta uu keeno isbeddel ku yimaada maskaxda.
Isbeddelladani waxay sidoo kale ku dhici karaan maskaxda waalidka. Kim waxa uu soo xigtay daraasad ay Israa’iil ku sameysay lammaane dhawaan carruur isu dhalay.